सावधान ! फेसबुके मित्रताबाट यसरी ठगिन्छन् मान्छे!
सावधान ! फेसबुके मित्रताबाट यसरी ठगिन्छन् मान्छे!
महानगरीय अपराध महाशाखाले १२ फागुनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रेम कटुवाललाई पक्राउ गर्‍यो । कटुवाल पक्राउको कारण धेरैका निम्ति जति अचम्मको विषय थियो, त्यति नै उनलाई लागेको अभियोग । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुबाट लिएका हौ।
महाशाखाले यो र यस्तै ठगीको घटनाको तारमा कटुवालको संलग्नता देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ६, २०७३ ०५:२६:३१